Barcelona oo ku Guuleystay Koobka Mandela Cup…kadib cayaar Saaxiibtimo oo ka dhacday South Africa – Gool FM
Barcelona oo ku Guuleystay Koobka Mandela Cup…kadib cayaar Saaxiibtimo oo ka dhacday South Africa
( South Africa ) 16 Maajo 2018. Luis Suarez ayaa kamid ahaa gooldhaliyaasha kulankii ay Barcelona garaacday kooxda heysata horyaalka South African Mamelodi Sundowns oo ay kaga badiyeen 3-1 koobka Mandela Cup.
Ousmane Dembele iyo Andre Gomes ayaa sido kale gool u dhaliyay kooxda horyaalka Spain ka hor inta uusan goolka calanka u dhalin Sibusiso Vilakazi naadiga Mamelodi Sundowns kulankii akdhacay garoonka Soccer City, ee u dhaw Johannesburg.
Barca weeraryahankeeda Lionel Messi ayaa keydka ka yimid dhamaadka cayaarta markii uu kooxdiisa ka maqnaa kulankii asbuucan ay guuldarada kala kulmeen Levante taaso looga jabiyay guuldarada la’aantii horyaalka La liga.
Kulankan ayaa qeyb ka ahaa dabaaldaga South Africa ee kasoo wareegatay 100 sano guurada dhalasha Nelson Mandela.
Mandela, ayaa ahaa madaxweynihii u horeyay ee madoow ah kasoo loo doorto madaxtinimada South Africa wuxuuna dhitay bishii December sanadkii 2013 isagoo jira 95 sano.
Barcelona ayaa kusoo gabagabeyn doonta kulamadeeda kal cayaaredkan horyaalka Spain kooxda Real Sociedad cayaar ka dhaceysa garoonka Nou Camp axada soo aadan.
Gianluigi Buffon: “Waxaan Ka Baqayaa In Aan Kubada Cagta Ka Fariisto”
Shax laga sameeyey 11-ka ciyaaryahan ee mudnaa inay xulka qaranka Brazil kala qeyb galaan Koobka Adduunka laakiin aan calafka u yeelan!